Fiovan’ny toetr’andro: hampitombo ny famatsiam-bola ny Banky Iraisam-pirenena | NewsMada
Fiovan’ny toetr’andro: hampitombo ny famatsiam-bola ny Banky Iraisam-pirenena
Par Taratra sur 12/05/2021
Nahatratra 83 miliara dolara ny vola novatsin’ny Banky Iraisam-pirenena ny firenena an-dalam-pandrosoana, ho an’ny fandaharanasa mifandraika amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro, ho an’ny taona 2016-2020. Nahafahana nampiakatra ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina izany, nampihenana ny voina avy amin’ny loza voajanahary ho an’ny fianakaviana marefo sady niomanana amin’ny loza. Namerenana amin’ny laonina ny tontolo iainana.
Hotohizana ny ezaka amin’ny dimy taona manaraka 2021-2025 ka hampitomboana ny famatsiam-bola hatokana amin’ity lafiny ity. Anisan’ny tanjona ny hampihenana ny fiparitahan’ny etona karbona (GES) sy ny fahafahana miatrika ny fiovaovan’ny toetr’andro. Ampifandrifiana amin’ny Fifanarahan’i Parisy ny tetikasa rehetra, ary tohanana ny firenena tsirairay amin’ny ezaka fialana amin’ny fampiasana saribao.
Sehatra dimy tena mpandoto
Ampifandraisina amin’ny lanjan’ny toetr’andro daholo ny asa fampandrosoana ataon’ny Banky Iraisam-pirenena, amin’io drafitrasa 2021-2025 io. Hamafisina ny fanohanana ny firenena tsirairay sy ny mpandraharaha tsy miankina. Anisan’ny hatao laharam-pahamehana ny sehatra dimy tena mpandoto ny habakabaka, dia ny angovo, ny fitaterana, ny tanàn-dehibe, ny fambolena, ny sakafo ary ny indostria.